"Magacayga Ha U Isticmaalina Inaad Dhibaato Kaga Abuurtaan Man United" - Bruno Fernandes Oo Xalay Saqdii Dhexe Ka Hadlay Wixii Ka Dhacay Qolka Lebbiska Man United - Gool24.Net
“Magacayga Ha U Isticmaalina Inaad Dhibaato Kaga Abuurtaan Man United” – Bruno Fernandes Oo Xalay Saqdii Dhexe Ka Hadlay Wixii Ka Dhacay Qolka Lebbiska Man United
Xiddiga khadka dhexe uga ciyaara Manchester United ee Bruno Fernandes ayaa xalay saqdii dhexe si adag u beeniyey warkarka sheegaya in isaga iyo tababare Ole Gunnar Solskjaer uu khilaaf u dhexeeyo oo qolka lebbiska ay ku dhex murmeen tababaraha waqtigii nasashada ee kulankii Tottenham.
Fernandes ayaa la beddelay waqtigii nasashada ee ciyaartaas xilli ay maraysay 4-1, waxaana markii ay ciyaartoydu garoonka kusoo noqdeen layaab ku noqotay inay arki waayeen laacibka ugu muhiimsan kooxdooda, iyadoo halkii ay isaga ka filayeen ay arkeen Fred.
Laakiin markii ay dhamaatay ciyaartii xalay waddankiisa Portugal uu 3-0 ku xasuuqay Sweden, ayaa waxa uu beeniyey wararkaasi, waxaanu yidhi: “Waxyaabo badan oo ku tidhi-kuteen ah ayaa laga sheegay arrintaas. Markii hore waxay ahayd in aanu annagu ciyaartooyo ahaan wax is weydiinay, manay ahayn is eedayn ee kaliya waxay ahayd in aanu mid ka mid ah ciyaartoyda (Victor Lindelof) wax is weydiinay, mana aha wax jira hadda. Waxa kale oo ay ahayd in aanu Solskjaer ciyaarta wada falanqaynay.”
Bruno Fernandes waxa uu sheegay in wararka kala qaybsanaanta ee laga sheegayo kooxdooda ay yihiin kuwo lagu doonayo in ciyaartoyda lagu kala jabiyo, waxaanu yidhi: “Waxa aan rumaysanahay inay tahay jid lagu kala qaybinayo kooxda. Waxa la sheegayna sidaa run umay ahayn.”
Sababtii loo beddelay ayaa uu iyadana ka hadlay, waxaanu yidhi: “Waxa la i beddelay waqtigii nasashada, waa run, waxaanay ahayd sabab dookh farsamo. Tababaraha ayaa ii sheegay in ciyaartu ay dhamaatay (waqtigii nasashada ayay sii samreen) ayna nagu soo fool leeyihiin ciyaaro badan. Waan fahmay. Kumaan qanacsanayn laakiin wax kooxda dhaawacaya maan odhanin.”
Warbaahinta ayuu u sheegay in magaciisa aanay u adeegsanin inay kala qaybiyaan kooxdooda Manchester United, waxaanu yidhi: “Magacayga ha u isticmaalina in ciyaartoyda kooxda ama tababaraha aad dhibaato kaga abuurtaan Manchester United. Jawiga kooxdu wuu wanaagsan yahay, diyaar ayaananu u nahay in aanu ciyaarta xigta (Newcastle) jawaab bixino”.